Wararka - Kahortaga iyo xakamaynta cudurka faafa ma yara dabacsan karo moment
Kahortaga iyo kahortaga cudurka faafa ma yareynkaro daqiiqad！
Horumarka cudurka faafa wuxuu wajahayaa halista "seddex isku dhafan oo is dulsaaran"
Tan iyo bilowgii xilliga qaboobaha, horumarinta cudurka faafa wuxuu la kulmay halista "seddex isku dhafan oo is dulsaar ah", xaaladda ka hortagga iyo xakamaynta ayaa noqotay mid aad u daran oo dhib badan, shaqooyinkuna waa kuwo dhib badan oo dhib badan.
Cudurka faafa ee adduunka wuxuu soo bandhigayaa halista "tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah" iyo "isbeddel" Deegaanka dabiiciga ah ee jiilaalka ayaa noqday silsilad qabow oo dabiici ah. Fayraska cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' wuxuu leeyahay waqti badbaado oo dheeri ah, firfircoonida fayraska, iyo halista gudbinta ee weyn. Intaa waxaa dheer, u-beddelashada fayrasku waxay kordhisay faafa iyo qarsoonida, taasoo keentay inuu si buuxda u dillaaco mowjadda saddexaad ee cudurrada faafa adduunka. Laga soo bilaabo Diseembar 2020, waxaa jirey in ka badan 600,000 oo kiisas cusub oo la xaqiijiyey adduunka oo dhan, iyo in ka badan 10,000 oo dhimasho cusub, oo labaduba ay yihiin heerar sare oo cusub tan iyo markii uu dillaacay.
Cudurka faafa ee gudaha wuxuu soo bandhigayaa halista isku-dhafan iyo is-dulsaarid goos goos ah iyo cudurro faafa oo maxalli ah. Laga soo bilaabo Diseembar 2020, 20 gobol ayaa soo sheegay kiisas cusub oo la xaqiijiyay oo la soo dhoofiyay iyo infekshanno astaamo ah. Laga bilaabo 24:00 Janaayo 7, 2021, dalkaygu wuxuu dhawaan xaqiijiyay 280 kiis oo maxalli ah, kuwaas oo 159 ka mid ah lagu daray usbuucii la soo dhaafay. Kiisaska, gaar ahaan cudurradii ugu dambeeyay ee ka dilaacay Magaalada Shijiazhuang, ee Gobolka Hebei. Soo ifbixida xaaladahaani waxay xasuusineysaa gobolkeena kahortaga iyo xakameynta cudurka faafa mana nasasiin karo.
Kahortaga iyo xakamaynta cudurka faafa wuxuu soo bandhigayaa halista iskudhaxgalka dadka, saadka iyo gawaarida. Gobolkeennu waa gobol leh dad aad u tiro badan oo ka baxa. Tirada shaqaalaha muhaajiriinta ah iyo ardayda jaamacadda dhigata waxay ka mid yihiin shanta ugu sarreysa dalka, badankoodna waxay ku qulqulaan Changzhumin deriska ah iyo ka hortagga iyo xakameynta cudurrada faafa ee muhiimka ah. Bandhigga Guga ayaa soo dhowaanaya, ardayduna waxay yeelan doonaan fasaxyo iyo soogalooti. Soo noqoshada dadka ganacsatada ah, iyo waqtiga safarka ugu sareeya ee dadka ka imanaya meelo kale oo ka tirsan Jiangxi, khataro kala duwan iyo arrimo aan la hubin sida qulqulka dadka, isu imaatinada iyo safarada ayaa is dhexgala oo la is dulsaaraa, taas oo si fudud u horseedi karta faafitaanka fayraska iyo xitaa koox cudurada faafa ah.
Tallaalka buuxa ee dadka muhiimka ah ka hor Iidda Guga
Jiilaalka iyo gu'ga ayaa ah xilli muhiim u ah ka hortagga iyo xakameynta cudurrada faafa. Gobolkeennu wuxuu si adag u fuliyaa tallaabooyin kala duwan oo ah "soo dejinta difaaca dibadda, dib-u-soo-celinta gudaha", iyo si taxaddar leh, markii ay bilaabatay, waxay haysaa caadi iyo saxnaanta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada, waxayna sii wadaa xoojinta ka-hortagga aafada ee adag ee lagu guuleystay iyo xakamaynta natiijooyinka.
Si taxaddar leh u hawlgal ka-hortagga iyo xakameynta cudurrada faafa xilliga qaboobaha iyo guga. Tan iyo bilowgii xilliga qaboobaha, gobolkeennu wuxuu qabtay dhowr shirar oo gaar ah oo lagu darsayo laguna fidinayo ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada jiilaalka iyo guga, isku dubaridka iyo xallinta arrimaha waaweyn, iyo kor u qaadista xarumaha taliska gobolka ee dhammaan heerarka si dhakhso leh loogu soo galo xaalad dagaal. Laga soo bilaabo Diseembar 2020, gobolkeennu wuxuu si isdaba joog ah u soo saaray 30 qorshe oo ku lug leh kahortagga iyo xakamaynta cudurrada jiilaalka iyo guga, tallaalka, baaritaanka nucleic acid iyo dhismaha rugta caafimaadka qandhada, keydka kheyraadka daaweynta, leyliska xaaladaha degdegga ah, iyo xoojinta ka hortagga iyo xakameynta cudurrada inta lagu jiro Maalinta Sannadka Cusub. iyo Bandhigga Gu'ga. Qorshuhu waa in si firfircoon oo joogto ah loola dagaallamo ka hortagga iyo xakamaynta jiilaalka iyo gu'ga. Intii lagu jiray Maalinta Sannadka Cusub, gobolkeennu wuxuu u diray 11 koox kormeer qaybo kala duwan oo gobolka ka tirsan si ay u sameeyaan booqashooyin furan oo aan horay loo sii shaacin si looga hortago khataraha kala duwan ee qarsoon ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada.
Iyada oo si adag loo waafajinayo habka kahortaga iyo xakamaynta wadajirka ah ee Golaha Gobolka ee ku saabsan hawlgalka mideysan ee tallaalka cusub ee coronavirus ee loogu talagalay dadka muhiimka ah, gobolkeennu wuxuu dejiyay qorshayaal shaqo ama qorsheyaal tallaal, kormeer aan caadi ahayn oo falcelin ah, daaweyn caafimaad, iyo magdhow falcelinno aan caadi ahayn oo daran, caddeynta laba qaybood Diirada saar dadka la tallaalay. Qaybta koowaad ayaa ah dadka halista sare ugu jira infekshinka sambabaha cusub, oo ay ku jiraan dadka leh khatarta sare ee soo-gaadhista shaqada, sida kormeerka kastamka safka hore iyo shaqaalaha karantiilka ah ee ku lug leh alaabada silsiladda qabow ee la soo dejiyo, rarka dejinta iyo dejinta, maaraynta, gaadiidka iyo wixii kale shaqaalaha la xiriira, khubarada gaadiidka caalamiga iyo kuwa gudaha Shaqaalaha, shaqaalaha ka shaqeeya dekedda xuduudaha, shaqaalaha caafimaadka iyo caafimaadka ee la kulma halista sare ee cudurrada faafa ee dibadda; dadka halista ugu jira infekshinka dibada, sida kuwa dibadaha u aada shaqo ama waxbarasho dano ganacsi ama dano gaar ah. Qaybta labaad waa shaqaale ku jira jagooyin muhiim ah oo dammaanad qaadaya howlaha aasaasiga ah ee bulshada, oo ay ku jiraan shaqaalaha damaanad qaadka nidaamka bulshada, sida amniga dadweynaha, dab-demiska, shaqaalaha bulshada, iyo shaqaalaha la xiriira ee ka tirsan hay'adaha dowladda iyo hay'adaha si toos ah ugu adeega bulshada; kuwa ilaaliya wax soo saarka caadiga ah iyo howlaha bulshada Shaqaalaha, sida biyaha, korontada, kululaynta, dhuxusha, shaqaalaha gaaska, iwm. shaqaalaha adeegga hawlgalka bulshada, sida gaadiidka, saadka, daryeelka waayeelka, fayadhowrka, aaska, iyo shaqaalaha xiriirka la leh. Gobolku wuxuu leeyahay baaritaan dhameystiran oo ku saabsan tirada dadka u baahan in laga tallaalo wareegan oo ah qiyaastii 1.6 milyan oo qof. Wareegan shaqo ee talaalka ah ee ka socda gobolka waxaa si rasmi ah loo bilaabay Diseembar 28, 2020. Waqtigaan la joogo, wadar ahaan 381,400 oo qof ayaa la tallaalay. Tallaalka dadka muhiimka ah ayaa la soo gabagabeyn doonaa ka hor Iidda Guga.
6 kooxo heer-deg-deg ah oo ogaanshaha nucleic acid heer gobol ayaa la sameeyay
Maalmahan, waxaa jira 223 xarumo caafimaad oo qandho ah kuwaas oo ka soo gudbay kormeerka gobolka, heerka dhammaystirka dhismuhuna waa 99.5%. Kuwaas waxaa ka mid ah, heerka aqbalaadda ee xarumaha caafimaad ee qandhada ee isbitaalada guud ee jaamacadaha iyo isbitaalada cudurada faafa ay yihiin 100%. Qiyaasta baaritaanka maalinlaha ah ee nucleic acid-ka ee gobolku wuxuu kordhay ilaa 338,000, iyo 6 heer heer gobol ah oo tijaabiya nucleic acid kooxaha wareega ee mobilada iyo 1 kooxda tayada xakamaynta ayaa la sameeyay.
Intaas waxaa sii dheer, gobolkeennu wuxuu sameyn doonaa dadaal kasta oo lagu sameeyo shaqo wanaagsan oo ah sambal ka qaadista iyo tijaabinta coronavirus-ka cusub ee nucleic acid ee cuntooyinka silsiladda qabow ee la soo dejiyo, si dufcad kasta iyo gabal kasta loo hubiyo. Sii wad inaad hirgeliso waayo-aragnimada qiimaha iyo wax ku oolka ah ee lagu soo qaatay marxaladda hore, sii wad hagaajinta habka caadiga ah, sii wado xoojinta "deegaanka shaqsiyeed" iyo ka hortagga, sii wado xoojinta ka hortagga kooxda iyo xakamaynta kooxeed, sii wado xoojinta ka hortagga iyo xakamaynta aasaaska, lana sameeyo dadaal kasta si looga hortago loona xakameeyo aafada xilliga qaboobaha iyo guga.
Waqtiga boostada: Jan-11-2021